Yekutakura Fever 2: Iyo huru "Zhizha Udpate" iri pano | Linux Vakapindwa muropa
Yekutakura Fever 2: Iyo hombe «Zhizha Udpate» inosvika
Kana iwe uri fan of yekufambisa simulation mitambo yemavhidhiyo iwe unonyatso kuziva zita racho Yekutakura Fever 2. Zvese zvinongedzo mune ino pfungwa uye izvo zvakare zvine chiteshi chayo cheLinux. Huye, pane nhau huru yezororo rezhizha, sezvo Zhizha Rekuvandudza riri pano, ndiko kuti, hombe yezhizha yekuvandudza ine yakawanda nhau.
Mufudzi Akanaka Varaidzo uye vanogadzira Urban Games vaburitsa iyo hombe kuvandudza Yekutakura Fever 2 inobata zvese zvikamu zvemutambo kuti uvandudze ese maficha. Pane dzimwe nguva shanduko huru dzinoonekwa, sezvaungaona kana uchiwana.
Muchokwadi, mukuburitswa kwenhau kwakaburitswa neavo vane basa rekuzivisa iyi yekuvandudza Yekutakura Fever 2, vakavimbisa kuti mutambo wevhidhiyo wasvika imwe yenguva refu kwazvo yepakati nguva yemitambo pamapuratifomu aripo. Uye ndezvekuti iwe unogona kuva nazvo anopfuura maawa makumi manomwe nemashanu ekunakidzwa kwakachena kutarisira nzira dzakasiyana dzekutakura muguta.
Zvimwe zve zvinhu zvakagadziridzwa mune Yekutakura Fever 2 inosanganisira:
Kuwedzera kutonga pamusoro pemotokari dzine zita iri uye zvakare mumigwagwa yekufambisa.
Yakawanda inonzwisisika mushandisi interface uye zvirinani maturusi ekuvandudza Gameplay.
Iyo yakatonyanya kunaka nyika ine kugadzirisa kune zviitiko.
Zvirinani mutambo menyu uye marongero matsva anowanikwa.
Kuwedzera kuita uye kugadzikana mumutambo wevhidhiyo.
Uye zvimwe zvakawanda zvekuvandudza zvaunofanira kuwana mune ino Zhizha Yekuvandudza ...
Kana iwe uchida kuona nhau zvizere, unogona tinya pano kuti uone shanduko dzese dzakasanganiswa. Nezve iko kwekutora zvirinyore kurodha, unogona kuzvitenga zvese muHumble Store, semuGOG uye zvakare muchitoro. Valve Steam. Kana iwe uchimhanyisa, mune yekupedzisira iwe unowana 50% dhisikaundi iyo isingagare kwenguva refu. Saka unogona kuchengetedza mashoma ma euro pakutenga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yekutakura Fever 2: Iyo hombe «Zhizha Udpate» inosvika